Ngwa 5 bara uru ga-eme ka njem gị dị mfe | Akụkọ Njem
Maria | | Atụmatụ, njem
Otu n'ime ihe ụtọ kachasị mma na ndụ bụ njem. Mara n'akụkụ ụwa niile na-enye anyị ohere ịnweta ahụmịhe na itolite dịka ndị mmadụ yana ịchọpụta ụzọ ndụ ndị ọzọ, mbara ala ndị ọzọ na gastronomies ndị ọzọ ji atụ anyị n'anya.
Oge a na ọgbara ọhụụ ọhụụ emeela ka anyị bụrụ ndị njem dijitalụ, nwee ike iji ohere niile nke ngwa ndị a raara nye njem iji mee ka njem anyị bụrụ ahụmịhe anyị agaghị echefu echefu.
Otu n'ime ngwụcha ngwanrọ nke etinyere maka njem nlegharị anya nke dị ugbu a, n'isiokwu na-esonụ anyị kọwapụtara ise ndị ga - enyere gị aka n'ọnọdụ kachasị dị iche iche nwere ike ime n'oge ezumike gị
5 Nzuzo Nzuzo
Otu n'ime nrọ ọjọọ ndị njem nwere ike ịnwe bụ na a kagburu ụgbọ elu ya, na-enwe oge na-egbu oge, na-efunahụ ya ma ọ bụ na-edebanye akwụkwọ mgbe ọ na-achọ ịmalite ezumike ya. N’enweghi obi abụọ, ọ bụ ọrụ na-eyi egwu iwepụ ọ calmụ na ịdị jụụ niile nke ị zubere ịga njem.
Ngwa n'efu na iOS na gam akporo nke nwere ike ịzọpụta gị na nsogbu bụ Flyunes. Omume ọma ya bụ na ọ na-ewetara onye njem ahụ oge na-aga nhọrọ ndị ha nwere ike ịrịọ n'aka ndị ụgbọ elu ma ọ bụrụ na nsogbu dị na ụgbọ elu ha dị ka ụkpụrụ European si dị. Nke ahụ bụ, ọ na-agwa gị uche nke ụgbọ elu ga-enye gị gbasara ụgbọ elu ndị ọzọ nwere oche, ụgwọ ego ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ụgbọ elu enyeghị onye njem ahụ enyemaka kwesịrị ekwesị, site na ngwa ahụ n'onwe ya, ndị ọchịchị Europe nwere ike ime ka ha mata na ha na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị a mgbe ha na-emezughị ọrụ ha.
Nke a mere na Spain ngwa jikọtara ọrụ ndu ndị njem nleta na nhọrọ nke ọdịnaya emepụtara onye ọrụ. Ndị mmadụ karịrị 800.000 ji ya, ị nwere ike ịhazi ezumike gị na sekọnd ole na ole karịa ebe 10.000 n'ihi na ọ na-enye ozi bara uru banyere obodo ị gara, ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ na maapụ mpaghara ahụ na-enweghị njikọ Internetntanetị, ihe dị oke mma ọ bụrụ na anyị bụ ndị mba ọzọ.
Site na TouristEye ị nwere ike ịchekwa saịtị ọkacha mmasị gị ma ọ bụ nkwenye nke ebe ị ga-eleta na ha na-emere gị na ndepụta nke ịchọrọ yana ị nwere ike ịkpọtụrụ ya iji hazie njem gị. Ọ na-apụ apụ maka ịdị mfe nke iji ya na ohere dị ukwuu ịkekọrịta njem gị site na netwọkụ mmekọrịta. Na mgbakwunye, enwere ike ịkọwa ebe ọ bụla anyị gara ka "eleta" a ga-atụkwasị ya na "akwụkwọ ndetu njem" anyị, nke nwere ohere ide ihe.
TouristEye na-enyekwa ohere ịnata ọkwa na ọkwa ma ọ bụrụ na enwere onyinye na-atọ ụtọ na ngwụsị izu iji mee njem oge ikpeazụ. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime usoro ngagharị kachasị mma nke ndị njem na ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ otu n'ime ngwa njem njem. Nke ukwuu nke na ọ bụ nnukwu ụlọ Lonely Planet zụtara ya, otu n'ime ndị mgbasa ozi kachasị ukwuu n'ụwa.
Ndị hụrụ ecotourism na egwuregwu egwuregwu ga-ahụ Alpify bara ezigbo uru. Ngwa a na-eji teknụzụ geolocation ziri ezi nke ukwuu iji chọta anyị n'èzí ma ọ bụrụ na anyị enwee ihe ọghọm ma ọ bụ ọnwụ. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ na kọntaktị na ọrụ mberede nke ndị obodo kwụụrụ.
Ọ bụrụ na ihe ọghọm, ọ dị mkpa naanị ka onye ọrụ jiri ekwentị mkpanaaka were ya wee mee ka ngwa nyocha ahụ wee nwee ike izipu akara ngosi mberede na ọrụ 112 ịpị bọtịnụ uhie. Na mgbakwunye, mgbe enweghị Internetntanetị, a na-eziga arịrịọ mberede site na SMS ma ọ ruru usoro Alpify ozugbo ka ndị ọrụ mberede 112 rụọ ya.
Oké mkpa ma ọ bụrụ na ị na-aga hiking naanị ma ọ bụ site na-amaghị ebe. Alpify na-arụ ọrụ na Spen, na Onyeisi Andorra na Waraira Repano National Park na Caracas (Venezuela). Maka iOS na gam akporo.
Ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa ejirila Tripadvisor mee atụmatụ oge ụfọdụ maka njem ha n'ụzọ zuru ezu, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime usoro nhazi njem njem kachasị mma.
Ngwa a nwere ihe karịrị 225 nde echiche na nkwupụta sitere n'aka ndị njem n'ezie, nke na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ụlọ nkwari akụ kachasị mma, ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa, ụlọ oriri na ọ cooụ cooụ kachasị mma na ihe omume na-atọ ụtọ ịme ebe ọ bụla ị na-aga. Na mgbakwunye, site na iji otu ịpị, ị ga-enwe ohere idobere ndozi maka họtelu, ụlọ nri na ụgbọ elu. Ngwa iji hazie njem n'otu ntabi anya!
Ngwa a ga - abụ ezigbo onye enyemaka gị mgbe ị na - akwadebe njem ebe ọ na - enye gị ohere idekọ ụlọ nkwari akụ okomoko site na mkpanaka gị na ego ruru 70%. Ekele maka ngwa a, ndị ọrụ ga-enwe ike ịdebanye aha ụlọ nkwari akụ anọ na ise nke ebe ha na-aga eleta ma nata ọkwa nke ahaziri maka mbelata ego.
Ihe Nzuzo Nzuzo na-ezukọ na ebe obibi naanị ya mere na ọ dịghị aghụghọ ọ bụla, naanị na onyinye ndị ahụ nwere ụbọchị ngwụcha ma dị maka obere oge. Ngwa a dị maka iOS na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » 5 bara uru ngwa ga-eme ka njem gị dị mfe
Osimiri kacha mma maka nkịta na Spanish